(DEG DEG+Dhageyso);-Xildhibaano Ka Tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo Shaaciyey Mooshin Ka Dhan ah Dowlada.. | AllJubbalandnews
(DEG DEG+Dhageyso);-Xildhibaano Ka Tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo Shaaciyey Mooshin Ka Dhan ah Dowlada..
Xubno ka tirsan Baarlamaanka Somaliya ayaa waxa ay wadaan Mooshin ka dhan ah Dowladda Imaaraadka Carabta oo lagu eedeeyay inay faragelin cad ku hayso arrimaha Siyaasada Somaliya.
Xildhibaan C/laahi Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya ayaa sheegay inuu socdo qorshahaasi ku aadan diyaarinta Mooshinka oo ay wadaan Xildhibaanada qaar si wax looga qabto faragelinta Imaaraadka ay ku hayso arrimaha Somaliya.
“Mooshin laga wado Imaaraadka waan maqlaayay, oo la leeyahay xadgudub ayeey sameysay oo Dowladda Somaliya ayeey ku xadgudubtay, waana arin fiican Dowlad kasta oo arrimaha Somaliya soo faragelisa in lala xisaabtamo.” Ayuu yiri Xildhibaanka.
C/laahi Sheekh Ismaaciil, ayaa sheegay inuu aad uga war haayo dhaqdhaqaaqa la xiriira Mooshinkaan laga diyaarinaayo Dowladda Imaaraadka Carabta oo ay abaabulkeeda wadaan Xildhibaanada.
Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeya inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha la xiriira Saaxadda Siyaasadda Somaliya, kadib go’aankii dhexdhexaadnimada Dowladda Somaliya ay ka qaadatay Khilaafka dalalka Khaliijka ka taagan.
Dowladda Somaliya ayaa hadda la kulmaysa culeesaad kala duwan oo kaga imaanaayo dhanka Maamul Goboleedyada dalka ka jira, kuwaasi oo taageero kala duwan u fidiyay go’aankii Dowladda Sacuudiga ee Qatar lagu xanibay, inkastoo Dowladda Somaliya ay sheegtay inay dhex dhexaad ka tahay.
Imaaraadka Carabta iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka ayaa dhaqaalo ku bixinaya sidii culeesaad siyaasadeed loo saari lahaa Dowladda Madaxweyne Farmaajo, iyaga oo bixiyay qarash badan, adeegsanayana siyaasiyiin kala duwan.